प्रधानमन्त्री अाेली र स्वास्थ्य मन्त्री यादवबीच बढेकै हाे त मनमुटाव ?
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको अनसनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच मनमुटाव बढिरहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
सरकारमा सहभागि हुनु पूर्व संविधान संशोधनको अडानमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादवको स्वर पछिल्लो समय मलिन मात्रै भएको छैन, पुरै रिजर्भ हुँदै गइरहेको छ ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरूसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमान हाँकिरहेका मन्त्री यादव यस विषयमा मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।
मन्त्री यादवको मौनताले उनी डा. केसीले राखेका मागहरूको पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन् भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । तर उनको मौनताले डा. केसीको मागको विपक्षमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अडानप्रति मौन असहमति प्रकट गरिरहेको संकेत गर्दछ ।
यादव स्वास्थ्यमन्त्री छन् । तर पछिल्लो समय आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जल्दोबल्दो विषयमा नबोलेर उनले जति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दथ्यो त्यति नगरेको चर्चा चलिरहेको छ ।
श्रीलंका आक्रमणः यसरी गिर्जाघरमा पसेका थिए आक्रमणकारी, भिडियो सार्वजनिक
एजेन्सी । अन्ततः श्रीलंकामा भएको आक्रमणबारे केही प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् । श्रीलङ्कामा आइतबार ३ सय ५० बढिको ज्यान जानेगरी भएको विस्फोटनमध्ये एउटा गिर्जाघरमा एकजना सन्दिग्ध आक्रमणकारी छिरेको भिडि